Qur'aana Archives - Page 15 of 17 - Ibsaa Jireenyaa
December 15, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti Jannataa fi qananii ishii ilaalaa turreera. Jannanni fi qananiin ishiin of keessaa qabdu haqa shakkii wayitu hin qabne, namoonni amanan gaggaariin gara fuunduraatti seenaniidha. Sababni isaas, odeefannoon waa’ee Jannataa fi haala namoota ishii keessa seenanii Rabbul aalamiin waan hundaa uumee fi Jannata qopheesse irraa kan dhufeedha. Qur’aanni Isarraa waan bu’eef odeefannoo Jannataa fi ibiddaa bal’innaan of keessatti kan qabateedha. Kanaafi, itti aansee ni jedha:
December 9, 2019 Sammubani Leave a comment
Suuratu Al-Mursalaat waa’ee Guyyaa Qiyaamaa, namoota Qiyaamaa kijibsisan, muttaqootaa fi mindaa isaanii ilaalchistee dubbatti. Nama sirritti itti xinxalleef qoricha taati. Gaflaa keessaa isa/ishii dammaqsiti. “Eessa deemaa jirtaa? Gahuumsi kee eessaa? Warra Qiyaamaa kijibsiisan keessaa yoo taate, gahuumsi kee kana. Warra Qiyaamatti amananii fi hojii gaggaarii hojjatan keessaa yoo taate immoo, gahuumsi kee kana” namaan jetti. Eenyutu Suurah tanatti xinxalla ree? Kuni hiika fi ibsa suurah tanaa kitaabban tafsiiraa irraa haala kanaan dhiyaatedha. Buusuf (downlaod) gochuf: https://sammubani.files.wordpress.com/2019/12/tafsiir-suuratu-al-mursalaat.pdf
Kutaa darbee keessatti wanta Guyyaa Murtii taasifamu muraasa isaa ilaalle turre. Har’as itti fufuun kutaa xumuraa suuratu Al-Mursalaat ni ilaalla.